တည်ဆောက်ဆဲ ဘုရင့်နောင်တံတား တိုင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွား.. ~ ဒီမိုဝေယံ
တည်ဆောက်ဆဲ ဘုရင့်နောင်တံတား တိုင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွား..
မရမ်းကုန်းမြို.နယ် (၁)ရပ်ကွက် ဘုရင့်နောင်လမ်းနှင့်သမိုင်းလမ်း ထောင့်ရှိ ဘုရင်နောင်ဂုံးကျော်တံတား တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း တံတားတိုင်အမှတ်(၂)ပြိုကျမှု ယနေ့ညနေ လေးနာရီခွဲအချိန်ခန့်က ဖြစ်ပွားခဲသည်။ ထိုသို့ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ တံတားတိုင်အား သံချောင်းများ အသုံြး့ပု ၍ အခြားတံတားတိုင်တစ်ခုဖြစ်သော တိုင်အမှတ်(၃)နှင့် ချိတ်ဆက်ရန်ဆောင်ရွက်စဉ် ပြိုကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တံတားတည်ဆောက်ရေး အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးကပြောသည်။
တံတားပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်အား မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်သော မိဘဂုဏ်အပေါင်ဆိုင်မှ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူက ညနေလေးနာရီခွဲလောက်မှာ တံတားတိုင်က တအိအိပြိုကျလာတာပဲ။ စပြိုတဲ.အချိန်မှာကားတွေနဲ့ လူသွားလူလာရှင်းနေလို. ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ တာတော့မရှိဘူး။
ဒါပေမဲ.တံတားတည်ဆောက်နေတဲ. ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမားနှစ်ယောက်ကတော့ ပြိုကျတဲ. သံတိုင်တွေနဲ့ အတူတွဲလောင်ကြီးဖြစ်နေပြီး တစ်ယောက်ခြေထောက်ကို ထိသွားတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ လက်နဲ.ခြေထောက်မှာ ပွန်းပဲ.ဒဏ်ရာတွေရသွားတယ်ဟု ပြောသည်။